အရမ်း ဆက်စီ ကျ တဲ့ ပိုစ့်တွေ နဲ့ ရင်ဖို စရာ ပုံရိပ်တွေ ကို ချပြ လာ ခဲ့တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း – GaMone Media
အရမ်း ဆက်စီ ကျ တဲ့ ပိုစ့်တွေ နဲ့ ရင်ဖို စရာ ပုံရိပ်တွေ ကို ချပြ လာ ခဲ့တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
မော်ဒယ်နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ အနုပ ညာလောကမှာ နေရာ တစ်ခုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့သူ လေးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ချစ်ရာကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကောက်ကြောင်းအလှတွေ ပေါ်လွင်တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အပြည့်အဝ ရယူထားနိုင်သူလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေအပြင် မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို ပါဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကေ တာ့ ယခုမှာ ပရိသတ်တွေအသည်းယားလောက်အောင် အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့ကို ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ” ကိုကိုတဘက်လည်းခဏယူသုံးလိုက်ပီနော်…. “ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ သူမ ရဲ့ လူမှူကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ်နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ေမာ္ဒယ္ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ကေတာ့ အႏုပ ညာေလာကမွာ ေနရာ တစ္ခုကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့သူ ေလးျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ ခ်စ္ရာေကာင္းလြန္း တဲ့ အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြ ေပၚလြင္တဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ကို ခ်ျပေလ့ရွိသူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ကေတာ့ အခ်ိဳးအစားေျပျပစ္တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈေရာ ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကိုပါ အျပည့္အဝ ရယူထားႏိုင္သူေလး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြအျပင္ ျမန္မာဝတ္စုံေလးေတြကို ပါဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ သူမကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူမေက တာ့ ယခုမွာ ပရိသတ္ေတြအသည္းယားေလာက္ေအာင္ အမိုက္စား ပုံစံေလးနဲ႔ ေႂကြေလာက္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕ကို ခ်ျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ” ကိုကိုတဘက္လည္းခဏယူသုံးလိုက္ပီေနာ္…. “ဆိုၿပီး အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးနဲ႔အတူ သူမ ရဲ႕ လူမႉကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေမာ္ဒယ္ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ရဲ႕ အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။
Previous post ‌ေထာ်လာဂျီ ပေါ် တက်ကာ အလန်း စား ဝတ်စုံ နဲ့ အမိုက်စား ပို့စ်တွေ အပီအပြင် ပေးနေကြ တဲ့ မမသင်ဇာ နဲ့ ဂျိုကာ
Next post တင်းရင်း လှပလွန်းနေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေ တဲ့ ဝင်းရွှေရည်သင်း